Ireo mpanoratra lahatsoratra nosoratan'i Harold W. Percival dia mampiseho ny famoriam-bola manontolo navoaka tao The Teny gazety eo anelanelan'ny 1904 sy 1917. Efa ho zato taona monja ny gazety, isam-bolana. Ny volavolan-dalàna mifono roapolo amby roapolo The Teny dia manana mpanangona sy tranomboky vitsivitsy manerana izao tontolo izao ihany.
Tamin'ny fotoana voalohany nosoratan'i Mr. Percival, Fisainana sy faniriana, navoaka tao amin'ny 1946, namolavola fomba fiasa vaovao izy izay ahafahany mitondra tsara kokoa ny vokatry ny fisainany. Izy io dia manazava ny tsy fitovian-kevitra eo amin'ny asany taloha sy aoriana. Matetika ny typos typings dia noho ny fe-potoana henjana isam-bolana ary ny ilàna ny fanaovana typing ny taratasy tsirairay avy. Ho tombony amin'ny fitazonana ny maha-azo itokiana ireo antontan-taratasy ireo, ho an'ny taranaka ankehitriny sy ho an'ny taranaka ho avy dia averina eto tsy misy famintinana izy ireo. Midika izany fa nitazona azy ireo ny hadisoana mahazatra sy ny fampiasana latabatra mandritra io fotoana io.
Raha toa ianao ka vaovao amin'ny asa soratr'i Mr. Percival dia azonao atao aloha ny mahafantatra tsara ny magnum opus, Fisainana sy faniriana.
tsindrio eo amin'ny PDF eto ambany raha te hamerina ny endrika voalohany.
tsindrio eo amin'ny HTML ho an'ny fanamoriana mora.